कम्युनिष्ट नेताको घरमा ११ हजार ७ सय ९३ केजी सुन भेटियो, बैकमा ६० अर्ब बचत ! - जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा. लि
गृहपृष्ठ » अनौठो संसार » कम्युनिष्ट नेताको घरमा ११ हजार ७ सय ९३ केजी सुन भेटियो, बैकमा ६० अर्ब बचत !
काठमाडौ । भ्रष्टाचारको कुनै सीमा हुँदैन । भ्रष्टाचार डुवेकाहरु कहिलै पूर्ण हुँदैनन् । यो यति जटिल रोग हो की कसैलाई छोड्दैन । यसले देश र जनतालाई नै सुकाईरहेको हुन्छ । यो तथ्य चीनमा भेटिएको छ जहाँ एक नेताको घरबाट साँढे १३ टन अर्थात ११ हजार ७ सय ९३ केजी भन्दा बढी सुन भेटिएको छ ।
घरको कोठाका दराजहरु सुनले भरिएका थिए । घरभित्र सुनको ईट्टाको ठूलो परिणाम थियो । सुनकै बारहरु लगाइएको थियो । कोठा सुनै सुनले बनाइएको थियो ।
३० अर्ब डलर भ्रष्टाचार गरेको आशंकामा पक्राउ परेका उनको घरको यसै महिना खानतलासी गर्दा साँढे १३ टन (११ हजार ७ सय ९३ केजी) सुन बरामद भयो । बरामद सुन घर निर्माण गर्दा प्रयोग गरिएका छन् । घरको कोठाहरु नै सुन जस्तो थियो । सुन बरामदको परिणाम देखेर अनुसन्धानकर्ता नै छक्क परे । खोज्दै जाँदा उनको बैंक एकाउन्टमा मात्र ५२ करोड डलर भेटियो जुन नेपाली रुपैयाँ ६० अर्ब हुनआउँछ ।
चीन सरकारले उनीमाथि भ्रष्टाचारको अभियोगमा छानविन अगाडि बढाइसकेको छ । उनको अभियोग पुष्टि भएमा फाँसीको सजाय सम्म हुनसक्छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्दै आएका छन् । यस क्रममा चीनका उच्च अधिकारीहरु समेत पक्राउ परेर कारबाहीमा परेका छन् । एजेन्सी
आमा कुकुरले आफ्नो सन्तानलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न गरेको प्रयास अहिले सर्वत्र भाइरल [भिडियो]
४ फिट अग्लो मुसा भेटिएपछि मानिसहरुमा भागदौड